Kamerona: Ernest Obama Affair, mpamoaka haino aman-jery nataon'i Haman Mana - teles relay
Kamerona: Ernest Obama Affair, tonian-dahatsoratr'i Haman Mana
OLONA SY FAHAFAHANARARINYCOMPANY
By Chinde Last nohavaozina Jona 27, 2020
Manohy ny maharesy ny fisamborana ny mpanao gazety Ernest Obama Hatramin'ny 18 jona, daty nisamborana azy dia nampihetsika saika ny vaovao ny raharaha. Tezitra ny lehilahy media. Io no toe-javatra nataon'ny talen'ny famoahana ny isan'andro isan'andro ny Le Jour, izay nanao ny tonian-dahatsoratra nataony tamin'ny 22 jona, izay mitsipaka ny fitsaboana izay i Ernest Obama no lasibatra.
Tao amin'ny fanontana ny alatsinainy teo, Haman Mana manameloka azy ireo "Magistrate izay mandray anjara amin'ity fampisehoana mihetsika ity", sy mpanao gazety miasa ho an'ny Vondrona L'Anecdote izay "Avereno amin'ny patia ny peniny"
teles relay.com dia nahazo an'io editorial io ary nanolotra izany ho anao…
Ny fotoana ny siccarios [mafanaot izay namono olona niaraka tamin'ny fanamarihan'ny paiso] Ny andro hafa, tompon'andraikitra iray mampiahiahy ny iray amin'ireo mpiasa ao aminy no naka denaria sasany taminy, na nitetika azy indroa tamin'ny daroka vitsivitsy, dia nanapa-kevitra ny hanasazy azy. Niantso mafy tao amin'ny birao izy, zandary roapolo teo ho eo, nirongo fiadiana toa ny handroaka ny mpampihorohoro indrindra.
Iza no nisamborin'ireo mpiambina ilay olona niahiahy ary tonga dia tsy nanala baraka azy teo imason'ny mpiara-miasa aminy ary indrindra ny rehetra, tamin'ny alàlan'ny sary mihetsika avy amin'ny menu, ny sehatra. Raha ny fandehany fa fantsom-pahitalavitra ity orinasa ity, dia mpanao gazety io mpiasa io, ary mpandraharaha manankarena vao haingana ity tompon'andraikitra ity ...
Anaran'ny toerana sy tsangambato any Kamerona: Ny mariky ny…
Kamerona / Alternation eo an-tampon'ny Fanjakana: "ny zanaky ny avaratra ...
Ny sarimihetsika fisamborana dia niseho tamin'ny fotoana voalohany tamin'ny gazety hariva, miaraka amin'ny "tatitra" manohitra ny mpiara-miasa sy amin'ny voninahitry ny lehib. Izy io dia mifanaraka amin'ny vanim-potoana, nisy ny tambajotra sosialy nandona, indrindra fa ho an'ireo izay, "vita tsara" ho an'io mpanao gazety io, raha jerena ny fomba fanao manokana - izany hoe ny kely indrindra - asa ...
Tsy any no olana. Ny misy ifandraisany amin'ity scenario ity dia ny fampiasana ny herin'ny besinimaro sy ny andrim-panjakana amin'ny repoblika hamahana raharaha manokana, ivelan'ny lalàna. Ireo mpikambana ao amin'ny mpitandro ny filaminana izay manolo-tena amin'ny lalao ity dia mandoto ny fanamiana an'ny Tafika an'i Kamerona. Tsy zandarimaria izy ireo, siccarios izany.
Ireo mpitsara izay mandray anjara amin'ity fampisehoana mihetsiketsika ity dia ahi-tena. Ireo mpanao gazety izay nampindrana ny peniny tamin'ity makiazy ity dia very ny laza mendrika rehetra. Ny mason'ireo mitovy taona aminy sy ny besinimaro.
Ho an'ny ambiny, ireo izay nanambara ny korontana dia hita eo imason'izy ireo: ny fakana takalon'aina ny mpitandro ny filaminana sy ny andrim-panjakana amin'ny repoblika nataon'ny vondron-tanàna. Moa ve ny tahotra no nametraka tamim-pahakingana hatrany hatramin'ny fametrahana ny mpanamory? Mbola misy eto amin'ny firenentsika, olona manan-tsaina, mahay milaza fa ajanony ity tami-dresaka ity. Momba an'io karazana antsipirihany io ny fivoaran'ny Firenena iray indraindray.
loharanom-baovao: https: //www.lebledparle.com/fr/societe/1113961-affaire-ernest-obama-l-editorial-satirique-d-haman-mana
Torohevitra 3 hitantana tsara ny teti-bolanao
Kamerona: Taorian'ny Cabral Libii, ny mpanao gazety Guibai Gatama dia nandefa ny Hetsika Northerners 10 tapitrisa